admin | Ukubheja kwezemidlalo
1I-XBIT I-Spain 1XBIT yenye yezona zibheji zibalaseleyo kumazwe e-CIS, apho ndinamava amnandi. Ukongeza ekubeni yiplatform yemali, likhaya elilungileyo apho unokwenza uqikelelo lwezinto ozithandayo. Kweli nqaku siza kuchaza yonke into Funda ngakumbi…
Ngu admin, eyadlulayo 8 iinyanga 7 iinyanga
Intshayelelo Enye yeekhasino ezidumileyo eYurophu yi-Unibet. Aba basebenzi basebenza ngokubheja kwezemidlalo kunye nemidlalo ye-kasino abanamaphepha-mvume ayimfuneko liCandelo eliBanzi lomdlalo., kodwa iwebhusayithi yakho inokufumaneka kwilizwe lethu (nakwi-Spanish). Ibanzi Funda ngakumbi…
IBhola ekhatywayo: Uhlalutyo, Uphengululo, Iibhonasi kunye neKhuphoni ngeKhowudi Xa sithetha nge-intanethi ekhompyuter, akunakwenzeka ukuba ucinga ngeBwin. Ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini yembali, IBwin yenye yezona ndawo zidume ngazo ezemidlalo kwi-Intanethi, ukuvuna izibonelelo ezilungileyo kunye nembono ezilungileyo kakhulu kwintengiso. Kule Funda ngakumbi…
888ezemidlalo-Uhlalutyo kunye noMbono we-888sport imalunga nokubheja kwezemidlalo kwinxalenye yomdlalo we portal odumileyo weSpanish 888, ikwanegumbi le-poker yekhasino ekwi-intanethi, 888ipoker kunye ne-888casino ibizwa. Apha siza kugxila kuhlalutyo lwethu ekusebenzeni kweli candelo, sivavanya uluhlu Funda ngakumbi…
I-betfair yekhasino: Uhlalutyo, Uphengululo, Iibhonasi kunye neKhuphoni eneKhowudi kwihlabathi elingummangaliso lokungcakaza kunye nekhasino ye-intanethi, I-Betfair yenye yezona ndawo zinomdla kwiwebhusayithi Ngaba kukho nantoni na engcono yokufaka isigqebhezana okanye ikhowudi yepromo, kunye nokusebenzisa loo mali kwimidlalo Funda ngakumbi…
I-Betsson yekhasino: Uhlalutyo, Uphengululo, Iibhonasi kunye neKhowudi eneKhowudi Betsson yenye yeekhasino ezinkulu kakhulu nezona zigqibeleleyo ezikwi-Intanethi. iinkampani ezahlukeneyo kunye nomgangatho uye waba yenye yeendawo ezinalo ixesha lekhasino enokubona okungcono. Ngu- Funda ngakumbi…
Isekisi yekhasino: Uhlalutyo, Uphengululo, Iibhonasi kunye neKhowudi eneKhowudi Zonke i-Casinos ezikwi-intanethi ziyafumaneka eSpain, ezinye zazo ukuya kwiSekwere yeKhasino. Esi sikhokelo uya kusiqonda isizathu sokuba le ndawo yomdlalo ukuze zombini izimvo zabasebenzisi Funda ngakumbi…
Ukungenelela - Uhlalutyo kunye noluvo lwamkelekile kwelinye lophononongo lwethu olusekwe kwinkampani yokuqala ukubonelela ukubheja kwi-Intanethi: I-Interapuestas. Kulungile, yasungulwa phakathi 1990, Ulawulo lwe-Grupo Interwetten kwi-intanethi luqalile ngaphakathi 1997, yaba yinkampani yokuqala ukuba ne Funda ngakumbi…
I-Luckia Casino -Uhlalutyo kunye neembono Xa sithetha ngeLuckia sithetha enye yeenkampani ezithandwayo nezithandwayo kwicandelo lezemidlalo eSpain., esekwe kwisixeko saseLa Coruña. Ngaphandle kwento yokuba inkampani inenkonzo yokuzonwabisa yomzimba kwaye Funda ngakumbi…
I-Lucky yekhasino: Uhlalutyo, Uphengululo, Iibhonasi kunye neKhowudi enekhowudi Ukuba ujonge enye indlela ekuphazamisayo kunye nenye yeendlela zakho zokuzonwabisa ozithandayo tyelela amakhasino, njengeekhasino ithamsanqa elungile kuwe. Le yekhasino kwi-intanethi ineziqalo zayo ngaphakathi 2012, Yintsapho yamaCatalan leyo Funda ngakumbi…